FAQs - Changzhou Plet Printing Technology CO, .LTD
Ndezvipi chikuru mhando SPS squeegee?
SPS squeegee iri Classified kupinda zvitatu zvikuru mumapoka: 1. Traditional M-mhando squeegee (pasina rutsigiro ndiro). 2, FGB Washington City Offices tichibvisa. 3, AS yaitsigira divi kabhoni faibha tichibvisa chingamu.
Kune akawanda yokutevedzera ari rabha chikamu SPS squeegee?
Pane Parizvino yokutevedzera mbiri, mumwe ndiye M-mhando rabha rinoshandiswa M-mhando uye FGB Washington City Offices noukomba, uye mumwe ari ndinoiitawo rabha rinoshandiswa AS-kabhoni faibha (conductive, zvakawanda solvent nemishonga, uye zvimwe wear- nemishonga).
Ndezvipi kukura nokurondedzerwa of M mhando tichibvisa guruu?
M mhando vane 9 * 50, 9 * 30, 7 * 40, 5 * 25, 5 * 20 muromo ukobvu maererano ukobvu, uye zvinogona customized maererano vatengi zvinodiwa.
Ndezvipi kukura FGB Washington City Offices itsvedzerere?
The Tsika Chidzitiro pakudhinda indasitiri FGB Washington City Offices tichibvisa nokurondedzerwa 9 * 50, kureba rokutema maererano vatengi zvinodiwa. Inogona customized maererano vatengi zvinodiwa.
Ndezvipi kukura AS kabhoni internet squeegee?
The Tsika Chidzitiro pakudhinda indasitiri AS kabhoni internet tichibvisa nokurondedzerwa 7 * 50, urefu maererano vatengi zvinodiwa. Inogona customized maererano vatengi zvinodiwa.
Chii faira pamanyorerwo uye customization nguva inodiwa yokuti tsika mabasa?
3D: Stp, XT; CAD: 2000 shanduro, tsika nguva: mukati 5 kushanda mazuva
The matatu Mhando itsvedzerere zvinogona zvakohwewa. M womuenzaniso uye FGB muenzaniso chete kunonyanyisa vachikuya mari 0.5mm (200 pajira riya kukuya vhiri). AS kabhoni faibha tichibvisa kuroora kunonyanyisa nokugeda mari 0.1mm (200 pajira riya vachikuya vhiri, carbon internet bhodhi rinogona kuva pasi). The squeegee kuti achangobva vakashandisa rine zvizhinji solvent mukati. The neukukutu banga unopinza kwazvo yakaderera kuti zvakohwewa pakarepo. Zvinotora maawa 24 chete vasati kukuya.
How yokugadza FGB Washington City Offices itsvedzerere uye AS kabhoni internet itsvedzerere kupinda kwakajairika Fixtures?
Vose FGB Washington City Offices itsvedzerere uye AS kabhoni internet itsvedzerere vari 1.2mm gobvu. Vanogona iiswe ane 8mm gobvu ikanyanya, izvo tinogona kupa.
Kwerunyararo SPS Squeegee?